Jizọs Emee Ka Ụwa Ghọọ Paradaịs ma Rụchaa Ọrụ Chineke Nyere Ya | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
1 NDỊ KỌRỊNT 15:24-28
IHE GA-EME NDỊ BỤ́ ATỤRỤ NA NDỊ BỤ́ EWU
ỌTỤTỤ NDỊ GA-EBI N’ỤWA MGBE ỤWA GA-AGHỌ PARADAỊS
JIZỌS EGOSI NA YA BỤ ỤZỌ, EZIOKWU, NA NDỤ
Obere oge e mechara Jizọs baptizim, Ekwensu gbalịsiri ike ime ka o nupụrụ Chineke isi tupudị ya ebido ozi ya. Ọ nwara Jizọs ugboro ugboro. Jizọs mechara kwuo banyere ajọ onye a, sị: “Onye na-achị ụwa na-abịa. O nweghịkwa ike n’ebe m nọ.”—Jọn 14:30.
Jọn onyeozi hụrụ n’ọhụụ ihe ga-eme ‘dragọn ukwu ahụ, bụ́ agwọ mbụ ahụ, onye a na-akpọ Ekwensu na Setan.’ A ga-achụpụ onye iro ụmụ mmadụ a n’eluigwe. ‘Ọ ga-ewekwa oké iwe ebe ọ maara na o nwere oge dị mkpirikpi.’ (Mkpughe 12:9, 12) Ndị Kraịst nwere ezigbo ihe mere ha ji kweta na ha bi ‘n’oge ahụ dị mkpirikpi’ nakwa na n’oge na-adịghị anya, a ga-atụba dragọn ukwu ahụ, bụ́ agwọ mbụ ahụ, n’abis, ya anọọ otu puku afọ n’akpaghị ike ọ bụla. N’oge ahụ, Jizọs ga na-achị n’Alaeze Chineke.—Mkpughe 20:1, 2.
Olee ihe ga-eme n’ụwa n’oge ahụ? Ole ndị ga-ebi n’ụwa mgbe ahụ? Oleekwa otú ihe ga-adịrị ha? Jizọs mere ka anyị mata azịza ajụjụ ndị a. N’ihe atụ o mere banyere atụrụ na ewu, o kwuru ihe ga-eme ndị ezi omume, ya bụ, ndị bụ́ atụrụ n’ihi na ha nyeere ụmụnna Jizọs aka. O kwukwara ihe ga-eme ndị na-enyereghị ụmụnna Jizọs aka, ya bụ, ndị bụ́ ewu. Jizọs kwuru, sị: “Ndị a [ya bụ, ndị bụ́ ewu] ga-anwụ ọnwụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume [ya bụ, ndị bụ́ atụrụ] ga-enweta ndụ ebighị ebi.”—Matiu 25:46.
Ihe a Jizọs kwuru ga-enyere anyị aka ịghọta ihe ahụ ọ gwara onye omekome ahụ a kpọgburu n’akụkụ ya. Nkwa Jizọs kwere nwoke ahụ dị iche ná nkwa o kwere ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi. Jizọs kwere ndịozi ya nkwa na ha ga-eso ya nọrọ n’Alaeze ya n’eluigwe. Ma, nkwa o kwere onye omekome ahụ bụ: “N’ezie, ana m asị gị taa, mụ na gị ga-anọ na Paradaịs.” (Luk 23:43) N’ihi ya, nwoke ahụ nwere olileanya na ọ ga-ebi na Paradaịs. Paradaịs pụtara ubi ma ọ bụ ogige mara mma. Ebe Jizọs kwere nwoke ahụ nkwa a, ọ pụtara na ndị bụ́ atụrụ n’oge anyị a ga-enwetakwa “ndụ ebighị ebi” na Paradaịs ahụ.
Na ndị ezi omume ga-ebi n’ụwa dabara n’ihe Jọn onyeozi kwuru gbasara otú ihe ga-adị n’ụwa n’oge ahụ. Jọn kwuru, sị: “Ụlọikwuu nke Chineke dịnyeere mmadụ, ya na ha ga-ebikwa, ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.”—Mkpughe 21:3, 4.
Ka onye omekome ahụ nwee ike ibi na Paradaịs, a ga-akpọlite ya n’ọnwụ. Ma ọ bụghị naanị ya ka a ga-akpọlite n’ọnwụ. Ihe Jizọs kwuru mere ka o doo anya na ọ bụghị naanị ya. Ọ sịrị: “Oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta, ndị mere ezi ihe ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ndụ, ndị mere ajọ omume ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ikpe.”—Jọn 5:28, 29.
Oleekwanụ maka ndịozi Jizọs kwesịrị ntụkwasị obi na mmadụ ole na ole ndị ọzọ ga-eso Jizọs nọrọ n’eluigwe? Baịbụl kwuru, sị: “Ha ga-abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga-esokwa ya chịa dị ka ndị eze ruo otu puku afọ.” (Mkpughe 20:6) Ndị a ga-eso Kraịst achị bụbu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị mgbe ha nọ n’ụwa. N’ihi ya, ha ga-emetara ụmụ mmadụ ebere, ghọtakwa otú ihe si dịrị ha ma ha nọrọ n’eluigwe na-achị ụwa.—Mkpughe 5:10.
Jizọs ga-eme ka àjà o ji ndụ ya chụọ baara ụmụ mmadụ uru. Ọ ga-eji ya mee ka ha nwere onwe ha ná mmehie ha ketara n’aka Adam. Ya na ndị so ya achị ga-eme ka ụmụ mmadụ ndị na-erubere Chineke isi zuo okè. Ụmụ mmadụ ga-adị ndụ ebighị ebi, nke bụ́ ihe Chineke bu n’obi kee mmadụ mgbe ahụ ọ gwara Adam na Iv ka ha mụọ ọmụmụ, baa ụba, ma jupụta ụwa. Ọnwụ ndị mmadụ na-anwụ n’ihi mmehie ha ketara n’aka Adam agaghịzi adị.
Jizọs ga-esi otú a mezuo ihe niile Jehova chọrọ ka o mee. Mgbe otu puku afọ Jizọs ga-achị zuru, ọ ga-enyeghachi Nna ya Alaeze ahụ, nyefeekwa ya ụmụ mmadụ ndị e merela ka ha zuo okè. Pọl onyeozi dere gbasara ihe a Jizọs ga-eme nke gosiri na ọ dị umeala n’obi. O dere, sị: “Mgbe a ga-edoworị ihe niile n’okpuru ya, mgbe ahụ, Ọkpara ahụ n’onwe ya ga-edokwa onwe ya n’okpuru Onye ahụ nke doro ihe niile n’okpuru ya, ka Chineke wee bụrụ ihe niile n’ebe onye ọ bụla nọ.”—1 Ndị Kọrịnt 15:28.
N’eziokwu, Jizọs na-arụ ọrụ dị mkpa ka ihe niile Chineke zubere mezuo. Ka nzube ndị ahụ na-emezu ruo mgbe ebighị ebi, Jizọs ga na-abụ ihe ahụ ọ kpọrọ onwe ya. Ọ sịrị: “Ọ bụ m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ.”—Jọn 14:6.
Gịnị ga-eme Ekwensu, bụ́ onye iro ụmụ mmadụ, n’ọdịnihu?
Ole ndị ga-ebi na Paradaịs? Olee otú ihe ga-adị n’ụwa mgbe ahụ?
Mgbe Jizọs ga-achịla otu puku afọ, gịnị ka ọ ga-emezu? Olee ihe ọ ga-eme ma ọ chịchaa otu puku afọ ahụ?
mailto:?body=Jizọs Emee Ka Ụwa Ghọọ Paradaịs ma Rụchaa Ọrụ Chineke Nyere Ya%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014739%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Jizọs Emee Ka Ụwa Ghọọ Paradaịs ma Rụchaa Ọrụ Chineke Nyere Ya